၊ ဗိုလ်ချုပ် ပြောခဲ့ သလို လမ်းပေါ်တက် ဆေးရိုးလှမ်းတာထက် ဆိုးနေကြတာ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒီ တခေါက် PAW PAW တို့ လ္ဘက်ရည်ဝိုင်း ထိုင် ......လေကန်ကြတာပေါ့......down town မှာ လှည့်ပါတ် သွားလာ နေတဲ့ ဘော်ဒါ ကြီးကတော့ ......မြို့ထဲနေသူတွေ များသောအားဖြင့် CAR PARKING အတွက် နေရာဦးကြတာလား ၊ ကိုယ်နေတဲ့ အခန်းရှေ့ ၊ ဆိုင်ရှေ့တွေ အမြင်ကွယ်မှာ စိုးလို့လား မသိပါဘူးကွာ နေရာတွေ ဦးထားကြတာ အမြဲ ပါပဲ.......ဒီတော့ ကိစ္စ ရှိလို့ မြို့ထဲ သွားရင် ကားရပ်ဖို့ နေရာကမရှိ ...... ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေကြတာ ဥပဒေတွေ စာအုပ်ထဲ မှာပဲ အိပ်နေလို့လား.....တာဝန်ရှိသူတွေပဲ အာဏာ သက်ရောက်မှု မရှိတာလား၊မလုပ်၊မရှုပ်၊မပြုတ်တွေကြောင့်လား မသိပါဘူးကွာတွေ့နေ ၊မြင်နေရ တာတွေက ဘာမှ မပြောင်းလဲတော့ စိတ်တိုင်းကို မကြ ပါဘူးကွာဆိုပဲ. .......................... ......... ..... ............................................................................................................................................. Y B S နဲ့ အမြဲလိမ့်နေတဲ့ ဘော်ဒါကြီးက........ဘယ်သူတွေဘာတွေဘဲ အီးပေါက်နေနေ.....မ ထ သ ကနေ Y B S ပြောင်းတာကို သူကတော့ အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံတယ် ဆိုပဲ......လူတွေက ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ပြောနေ ကြပေမယ့်......တကယ့်အပြောင်းအလဲမှာ ကိုယ်က ဘယ်နေရာက ပါဝင်ကူညီမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားပေး သင့်တယ်ဆိုပဲ..... Y B S အောင်မြင်ရင် ပြည်သူတွေ AIR CON ကားတွေနဲ့ တကယ့် နိုင်ငံ တကာကို ယှဉ် နိုင်မှာပဲ.......အရင် မ ထ သ က သူတွေသူတို့ဘာသာ စီးပွားရှာ ပေမယ့် ထမင်းရှင် ကို ငါနဲ့ကိုင် တုတ် ပြီး...... ကျေးဇူး ကမ်းနေ တာ၊ပြည်သူကိုစိတ်အနှောင့်၊အယှက်ပေးတာတွေ နေ့စဉ်ဓူဝ ဆိုတာ လူတိုင်း သိနေ တာ ပဲတဲ့.....ခုတော့ တချို့ လိုင်းတွေ ပြည်သူတွေ စိတ်ချမ်းသာသာ သွားနေ၇ပြီ....နှောင် ဆို တမြို့လုံး လွမ်း ခြုံ နိုင်တော့မှာ ဆိုတော့ဝမ်းသာ စရာပဲတဲ့......................................................... .........................................................................................................................ကား မောင်းတဲ့ ဘော်ဒါကြီး ကတော့ .......ငါတို့တွေ ကားနဲ့ မြို့ပါတ်နေတာ ဆိုတော့ ...... မင်းတို့ ပြောသ လို တွေ့နေ၊မြင်နေရတာ ပါပဲကွာ ......ခုက ကျောင်းဖွင့်ရာသီဆိုတော့ အစိုးရ ကျောင်းတွေ ကမှ ........ လမ်းမကျယ်တွေမှာ ဆိုတော့ လမ်းတွေ ပိတ်လည်း သွားလို့ရတော့ တော်သေး တယ် .....ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေက တစ်ချို့ ကိုယ် ပိုင် မြေနေရာမဟုတ်ပဲ ငှားဖွင့်ကြပြီး......ကျောင်းသားဦးရေကများ .....ကားရပ်ဖို့ နေရာက မလုံ ၊ မလောက် နဲ့ နောက်ပိုဆိုးနေတာက ........ ကျောင်းတွေက မဆင်းသေးဘူး ...... သောက်သည်းပိုတဲ့ မိဘတွေက ကိုယ်ပိုင် ကားတွေနဲ့....နာရီဝက် ၊ တစ်နာရီလောက် ကနေ ကြို ပြီး လာထိုင်စောင့်နေ ကြတော့လမ်း
တွေ ကပိတ် တကယ့် ဘရမ်းပတာပါကွာဆိုပဲ .......ဒါမှမဟုတ်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေ ကို...... .ကျောင်း ကားတွေနဲ့ပဲကျောင်းလာတက်အောင်......စံပြအနေနဲ့အရင်လုပ်ပြ နိုင်ရင် ...... အစိုး ရကျောင်းတွေလဲ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာနိုင်တယ် ဆိုပဲ................................................
.......... ........ ....... ..... ............................................................................................... ........... အပြင်ဆေးရုံနားနေတဲ့ ဘော်ဒါကြီးက ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေ ၊ SHOPPING CENTER တွေလဲ ဘာထူး လဲကွာ.....CAR PARKING လောက် လောက် ၊ ငှငှ ထည့်ပြီး မဆောက်နိုင်ရင်..... ဖွင့်ခွင့်ပေးကို မပေး သင့်ဘူးကွ ......ခုရန်ကုန်မှာ ဖွင့်ထား ပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေကို .......မင်းတို့ လေ့လာြ ကည့်လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ကြပြီး ......အဆောက်အအုံတွေ တိုးချဲ့ ဆောက်နေကြပေ မယ့်...... သူ တို့ငွေရဖို့ပဲ စဉ်းစားတတ်ကြတယ်ဆိုပဲ...... အခန်း ဘယ်နှစ်ခန်း ထပ်ထွက်မလဲပဲ ခေါင်းထဲထည့်ပြီး ...... CAR PARKING အတွက် ထည့်ကို မစဉ်း စားပေး ကြဘူးတဲ့........သူတို့ဘာသာ သူတို့ စီးပွားရှာ ကြပေ မယ့်.....ကျန်တဲ့ ပြည်သူလူထုကို စိတ်အနှောင့် ၊ အယှက်ပေးတာတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲကွတဲ့.....ဒီတော့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ တွေက.....ခုကတည်းက ဥပဒေတွေပြဌန်းပြီး .......ကြပ်ကြပ် ၊ မတ်မတ်လုပ်သင့်ပြီကွ ...... တိုင်းဒေသကြီး လွတ်တော်တွေ လည်းမှာ တာဝန် အပြည့် အ၀ရှိတာပေါ့ကွာဆိုပဲ......လွတ်တော်တွေ အိပ် မနေသင့်တော့ဘူး.......ပြည်သူတွေ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြသာနာတွေကို......fb ကနေ ကြည့်ပြီးကော်မတီ ဖွဲ့ပေးပြီး action ယူပေးသင့်ပြီ.......တဲ့